Caasho Xaaji Cilmi oo Eedeysay Madaxweyne Guuleed +Cod | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Caasho Xaaji Cilmi oo Eedeysay Madaxweyne Guuleed +Cod
Caasha Xaaji Cilmi, afada Ra’iisal Wasaarihii hore ee Somaliya, Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid), ayaa si adag u weerartay Madaxweynaha Galmudug, C/kariin Xuseen Guuleed, ka dib markii la musuq maasuqay kursigii Jufada Gaabane ee Beesha Saleebaan, Habargidir, kaga soo aaday qoondada dumarka.
Caasha Xaaji Cilmi, ayaan shalay Magaalada Cadaado uga qaybgelin tartanka kursigaasi, ka dib markii ay isu soo taaggeen musharaxiin rag ah, xilli sharcigu uu dhigaayo in kuraasta haweenka ay ku tartamaan haween oo keliya.
Caasha Xaaji Cilmi oo la hadashay VOA, ayaa tiri “Sidaad la socoto beesheyda waxay leedahay saddex kursi, sida Madashii Wadatashiga Qaran lagu heshiiyayna beeshii saddex kursi leh waa inay mid noqotaa haween. Ugaaska Beeshu wuxuu u qoondeeyay Jufadeeda kursigii qoondada gabdhaha ee laga rabay Beesha. Jufadaasi waxay leedahay buu yiri kursiga gabdhaha, waxaana ku soo tartamaaya gabdho.”
Markale waxay tiri “Sidaasi daraadeed aniga kii maanta oo rag ay ku tartamayeen, marna kuma jiro, mabda’iyana maba aaminsani inaan la tartamo rag, ayadoo qoondada haweenku jirto. Haddii Jufadeedu jufo aanan ahayn ay qaadan laheyd qoondada gabdhaha, aniga maba tartameen.”
Iyadoo hadalkeeda sii wadata, ayay tiri “Kursigaas wuxuu ahaa kursi gaar looga soocay kuraastii taalay Dowlad Goboleedka Galmudug, wuxuuna noqday kursi arrintiisu Somaliya oo dhan ay shaac ka noqotay.”
Caasha Xaaji Cilmi oo ka tirsan Baarlamaanka uu hadda waqtigiisu dhammaaday, ayaa tiri “Culeys gaar ah ayaa kursiga la saaray, ayadoo aniga la’iga dhex arkayo, waxaana gaar ahaan kursigaasi dagaal aan qarsoodi lahayn ku hayay Gudoomiyaha Guddiga Doorashada Galmudug iyo Madaxweynaha Galmudug, C/kariin Xuseen Guuleed.”
Marwo Caasha, ayaa intaa ku dartay “Sida ku xusan oo marag u tahay warqaddii uu ugu jawaabay Safiirka Mareykanka u fadhiya Somaliya, bisha 18-keedii warqaddii uu soo qoray, jawaabtii C/kariin ka bixiyay oo uu uga hadlay arrinta ku saabsan kursigaas. Qofkii akhriyaa wuxuu garanayaa qofka aniga kursiga igu haystaa inuu C/kariin yahay, anigana la’ii sameeyay sharuudo aan Xildhibaanada kale lagu xirin.